Danaha Shacbiga ayaan ka Door-biday – hogaanka.org
·Inay Jamhuuriyadda Somaliland aanay ahayn dal ka go’ay Soomaaliya, sida ay dawladda Soomaaliya ku riyoonayso; balse ay tahay dal ka baxay is-raacii dalkaa Talyaanigu u talin jiray.
·Inay Jamhuuriyadda Somaliland aanay ahayn dal la mid ah NFD (Soomaalida Kenya) iyo DDSI (Degaanka Soomaalida Itoobiya), balse la mid tahay dalka Jabuuti, Kenya, Sudan ama inta kale ee guumaysigii Yurub ka xoroobay.
Waxa se ayaan-darro ah in dhaqanka caalamiga ah ee u dhexeeya laba dal oo is-raacay markay kala baxan inay Soomaaliya xeerkani ay jabisay.
Xukuumadihii Muqdisho waxay weli u haystaan oo aanay tixgalinayn in wadahadalka lala lahaa ay u qaateen in Jamhuuriyadda Somaliland ay tahay gobol ka mid ah gobollada ay u taliso.
Dr.Edna Adan Ismail Previous
Coronavirus Global Response: WHO and Commission launch the Facilitation Council to strengthen global collaboration — The European Sting – Critical News & Insights on European Politics, Economy, Foreign Affairs, Business & Technology – europeansting.com Next